KAABASHKA BEIJING LEH XANUUNKA 'PANCREATITIS': MIYAY WAXTARSAN TAHAY AMA WAXYEELI KARTAA, MA SUURTAGAL IN LA CUNO SALAD SHIINE AH AMA AAN LAHAYN CUDUR, MAXAY YIHIIN SIFOOYINKA ISTICMAALKA? - BEER CAGAARAN
Iska ilaali caafimaadkaaga oo si fiican u cun! Kaabashka Beijing oo leh xajmiga pankreatitis: faa'iidooyinka iyo waxyeelada sheyga
Pankreatitis waa cudur ku dhaca beeryarada, kaas oo daaweyntu hoos u dhacdo nafaqada cuntada. Mararka qaarkood bukaanku waxaa lagula taliyaa dhawr maalmood si uu u diido in uu wax cuno oo dhan ama uu raaco cunto adag.
Asal ahaan, sababta xanuunka loo yaqaan 'pancreatitis' waa xad-dhaaf ku yimaada cabitaanka dheefshiidka iyo walxaha kale ee uu soo saaray jirka. Laakiin inta lagu jiro cuntada waa muhiim in aan laga reebin cuntooyinka cuntada ee faa'iido u leh mareenka caloosha. Tusaale ahaan, kaabajka Chinese.
Miyuu suurtogal ah in la cuno jirro?
Suurtagal ma tahay in la cuno kaabash shey ama aan ahayn - su'aashu waxay inta badan ka welwelaysaa dadka qaba cudurada mareenka caloosha.
Ereyga "kaabajka" qof walba waxaa loo isticmaalaa in lagu fahmo kaabajka cad ee koraya beeraha. Laakiin waxaa jira noocyo kale oo khudaarta, kuwaas oo aan wax faa'iido leh oo nafaqo leh jirka bini'aadamka, iyo isticmaalka ma keeno waxyeello.
Kaabashka Beijing wuxuu saameyn togan ku yeeshay habka dheefshiidka caloosha. Waxaa ku jira fiitamiino: A, E, PP, B2, B6, ascorbic acid. Khudradda waa mid qiimo leh oo ku jirta maadada sare ee borotiinka, carbohydrates, pectin ee ka kooban. Xitaa qadar fara badan oo fibre ah ma aha wax isir ah, sababtoo ah qaab-dhismeedka caleenta waa jilicsan oo jilicsan, ma waxyeelaynayo xuubka, ka duwan jilicsanaanta cuntada ee aan caadiga ahayn ee kaabash.
Gastroenterologists oo leh xajmiga pankreatitis ayaa loo oggol yahay inay isticmaalaan kaabajka Shiinaha, labadaba qaab cusub iyo daaweyn kuleyl ah.
Sababtoo ah halabuurka hodanka ah isticmaalka kaabajka Beijing ayaa kuu ogolaanaysa inaad la qabsato avitaminosis guga. Wuxuu saameeyaa habka dareemayaasha ah ee seddex-xakameynaya - waa tayad qiimo leh dadka qaba xanuunka 'pancreatitis'.
Nafaqeeyayaalku waxay kugula talinayaan inay ku jiraan alaabadaan ku jirta cuntadaada. Waxay faa'iido maahan oo kaliya xanuunka bukaanka qaba, laakiin sidoo kale mareenka caloosha oo dhan guud ahaan:
waxay kicisaa xiniinyaha mindhicirka;
ma xanuujinayso xubnaha miisaanka caañmaadka;
Fiber wuxuu saameeyaa geedi socodka dheefshiidka, wuxuu ka caawiyaa inuu nadiifiyo jirka sunta iyo sunta.
Kaabashka salad ma aha mid macquul ah in la cuno marka ay sii xumaanayso fangorosiinka. Ka dib oo dhan, khudradda waxay sii xumayn kartaa xaaladda, matag, matag, lallabo, caro. Marka caloosha cusub loo isticmaalo, xubnaha epithelial ee mareenka caloosha iyo mindhiciradu waxay noqdaan barar, taas oo keenta dareen xanuun, iyo xaaladda guud ee bukaanka sii xumaato. Waxaa loo oggol yahay in la cuno kaliya kaabajo la kariyey ama la kariyey, iyo tiro xadidan.
Waa inaad ogaataa in kaabajka Peking aan la geli karin waxyaabaha caanaha, oo ay ku jiraan caanaha. Waxay keeni kartaa calool xanuun.
Marxaladda ba'an iyo dabaysha
Si aad u isticmaasho kaabajka Peking ee cuntada, dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan muddada xasaasiga ah. Laakiin si aad u gashid liiska, waxaad u baahan tahay si tartiib ah, daawashada xaaladda caafimaad ee bukaanka. Laga bilaabo in la isku dayo kaabajka ayaa ka fiican shayga yar. Waqti ka dib, kordhinta qadarka. Marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay inaad ku shubtid xaashida biyo karkaraya Haddii wax waliba ay habboon tahay, markaa alaabta waxa loo isticmaalaa sida salad ah oo leh salad leh khudaarta cusub. Tirada isticmaalka - aan ka badnayn 2 jeer 7-10 maalmood.
Qaybta ugu badan ee la oggol yahay ee kaabajka shinnida ee marxalad dabadheeraad ah ee xanuunka pankreatitis waa 50-100 garaam.
Waqtiga dib-u-dhicida ba'an, isticmaalka kareemka ceeriin ee ceeriin waa in la joojiyaa. Waxaa lagula talinayaa in aad karsato koorsooyinka koowaad ama aad cunto hilibka la kariyey sida saxan dhinaca.
Dadka qaba xanuunka pankreatitis waxay u baahan yihiin inay si adag u raacaan cunto.. Diido kaabajka shinnida ee reer galbeedku ku baayacmushay, basbaas ama basbaas Iyada oo dulqaad shakhsi ah loo oggol yahay qadar yar oo ah kaabajka Shiidan ee Chinese, la kariyey sida cuntada caadiga ah, iyada oo aan wax khudrado dheeraad ah iyo wax lagu daro.
Markaad cunto karisid waa in ay fiiro gaar ah u yeelataa soo socda:
gooyaa qaybta cagaaran qaybo yaryar, sidaas darteed yaraynta culeyska habka dheef-shiidka;
yaree milixda, basbaaska kulul, xawaashka;
Karinta khudaarta kale waa la ogol yahay: karootada, zucchini, jilicsanaanta miraha.
Waxay dhacdaa in waxsoosaarka aan mas'uuliyadda lahayn ee alaab-yar-kalooriga ah ay bixiyaan kaabajiyayaal ay ku jiraan nitrit, nitrates ama alaabada fudud ee suuqa. Khudradda noocan oo kale ah wax faa'iido ah ma leh xataa qof caafimaad qaba, iskaba daa qof xanuunsan.
Ka hor intaadan iibsan khudaarta:
Leaves waa inay noqdaan kuwo suuban iyo dabacsan.
Waxaa muhiim ah in aanay jirin meelo qalalan, waxyeello leh ama leexsan.
Waa in aysan jireynin uumi u dhexeeya caleemaha.
Madax ka mid ah kaabajka waa inuu leeyahay midab cagaaran iftiin, iyada oo aan hurdada.
Iyadoo cudurka Pankreatic, waxaa la doorbidi karaa in lagu cuno kaabajka kulaylka-daaweynta, halka xajinta hantida faa'iido leh.
Halkan waxaa ah cuntooyinka qaarkood ee isticmaalka Kaabashka Peking ee cuntada.
Kaabashka Shiinaha 200-250 garaam;
duufaanka dhalinyarada yaryar - 1 xabbo;
yaanyo yar - 1 xabbo;
Baasaboor Bulgaar - 1 xabbo;
zucchini - 1/4 qaybood;
Basasha - 2 xabbo;
caws celceliska - 100 garaam;
saliidda cuntada - 10 garaam;
Ka dib markii karkaraya, waxaan u dirnaa meeshii daboolka dhalaalay, kaabajka, zucchini, basbaas.
Isla mar ahaantaana, waxaan diyaarinnaa dharka si gooni gooni ah: ku shub saliid saliidda digsiga, ka dibna la jarjarey basasha, celery, karootada, yaanyo iyo biyo yar.
Isku dar labadan daqiiqo isla markaana u dir digsiga. Waxa ugu muhiimsan waa in la hubiyo in kaabash uusan dheefshiido. Waxaa la gelin karaa biyaha dambe, oo ay la socdaan dhaymada. Salt
Haddii aanad furin daboolka, sii diyaarka yar oo u adeega.
Khudradda cagaaran oo bariis ah
kaabajka Peking oo 100-200 garaam;
Apple - 1 xabbo;
bariis - 250 garaam;
Si loo soo gaabiyo wakhtiga karinta, bariiska waa in la kariyaa diyaarsanaanta qayb ahaan.
Ku rid khudaarta ka horeysa iyo tufaaxa digsi.
Iska ilaali 5-10 daqiiqo.
Ku dar bariiska iyo qaar ka mid ah biyaha si joogta ah.
Dhamaadka dhamaadka karinta, ku dar milix iyo cagaarka jarjaran.
madaxa dhexe ee kaabajka;
toon - 3-4 xabo;
First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah in la kariyo iyo dhaq dhogorta.
Sidoo kale jarjar boqoshaada quartering.
Biyaha ku jira boorso laba ah waxay u keenaan isku kari, ka dibna soo saar caleemaha khudradda, iyo inta u dhaxaysa iyaga xabbadood oo toon ah.
Dabool dabool. Waqti Karinta 3-5 daqiiqo.
Kaabashka Chinese 500 garaam;
avocado - 1 xabbo;
saliid ama saliid saytuun ah - 10 garaam;
Dhammaan khudaarta waa la dhaqaa oo aan ahayn dalag badan.
Ku duub baaquli saladh ah, xilli subax leh.
Ku dar cagaarka.
Walaaq oo u adeega.
Kaabashka Chinese - khudradda vitamin ku haboon ee loogu talagalay pankreatitis. Waxa ugu muhiimsan - ha ka badin. Si aad u cuntid qaybo yaryar, iyo haddii ay dhacdo sii xumaan, isla markiiba ka saar sheygan cuntada. Iska ilaali naftaada iyo beeryarkaaga. Hana xanuunsanin.